Mpụpụ Na Redio
Home > Ngwaahịa > Mpụpụ Na Redio (Total 24 Ngwaahịa maka Mpụpụ Na Redio)
Mpụpụ Na Redio - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Mpụpụ Na Redio manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Mpụpụ Na Redio na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Mpụpụ Na Redio na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Tag: Mpempe Ala Ala Na-agbanwe agbanwe , Mgbanwe PV Ụlọ , Klaasị Na-enweghị Mpe
Anyị na-agbalịsi ike maka ebe obibi dị mma Ngwukota uzo di iche iche nke ikuku. Naanị otu efere . Ọ ga-eji na photovoltaic ike ojii, anyanwụ okporo ụzọ aka ná ntị oriọna, anyanwụ n'okporo ámá oriọna, mmiri mgbapụta, wdg Ezinaụlọ PV modul A...
Otu Na-atụgharị Ịdị Igwe Na-agbanwe agbanwe
Tag: Nweta Panel nke anyanwụ , Ogwe Mgbagwoju Anya Igwe Dị Mfe , Kọmitii batrị nke nwere ike ịgbanwe agbanwe
Akụkụ nke anyanwụ dị iche iche bụ ihe ọhụrụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ anyanwụ nke ụwa. Ọ bụ ogidi nwere ike ịmepụta ihe na-emepụta ihe na-agbanwe agbanwe. A na-eji ya na-agbagha na foldable ma dị mfe ibu. A na-ejikarị ịdị arọ nke ike anyanwụ mee...
Ihe Mgbochi Ọhụụ Na-ahụ Maka Mmetụta Na Mberede na nke Ọma Panel
Tag: Ihe na-edozi ahụ , Panels Igwe Igwe , Ịgba chaa chaa na mberede
N'èzí chaja chara chaa chaa chaa, oge ọhụụ n'èzí na-ebugharị ọkụ, ebe nke ìhè anyanwụ nwere ọkụ eletrik, na-eme ka njem gị nwee nchebe ọzọ. Ọgbọ ọhụụ nke ogige ndị dị elu, site na iji kristal monocrystalline nke dị na ya, echiche nke ịdị arọ...
Anyanwụ N'èzí Waterproof abụọ Isi Human Induction oriọna
Tag: Ahụhụ mmadụ , Na ìhè abụọ , Okpokoro Mgbidi n'èzí
Ọkpụkpụ mmadụ . Oriọna ọkụ na isi abụọ . Nchedo gburugburu ebe obibi nchedo gburugburu ebe obibi, nchekwa ikike na obere carbon. Igwe ọkụ nke PIR na-enwu ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na-emepụta okpukpu abụọ. A na-ebubo panel panel nke dị na mbara igwe ma ọ...
Ogwe nke anyanwụ na-agbanwe agbanwe
Tag: Ụlọ Board Generator Board , Board Supply Supply Board , Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
Akwụkwọ mpịakọta nke nchịkọta na-emepụta ihe ndị dị na mkpụrụedemede monocrystalline, a na-etinyekwa ya na iko na-emegharị na mmiri na-enweghị mmiri, ya mere ọ na-adịgide. Mgbe ìhè anyanwụ na-enwu, ogige ndị dị na mbara igwe dị ugbu a na nke volta,...
Obere Mmiri Na-ahụ Maka Mmiri nke Mmiri
Tag: 1.1KW Mmiri Mmiri N'uzo Mmiri , Mmiri na-ekpo ọkụ mmiri nke fotovoltaic , Mmiri mmiri mmiri dị ugbu a
1.1KW Ụlọ Mmiri nke Mmiri nke Mmiri nke Na-ahụ Maka Mmiri , nke nwere obere ala, obere mmiri, ntanye dị elu, wdg, Fizz zuru ụwa ọnụ usoro nke obere ike pumps mmiri mmiri. Usoro a na-agụnye oghere ndị dị na mbara igwe, photovoltaic mgbapụta...
Mpụpụ Na Redio akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Mpụpụ Na Redio ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Mpụpụ Na Redio kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Mpụpụ Na Redio wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.